HomeSuuqa kala iibsigaReal Madrid oo badashey Qorshaheeda saxiixa Paul Pogba
November 28, 2021 Suuqa kala iibsiga, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Wararka Ciyaaraha 0
Kooxda Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa in aynan u dhaqaaqi doonin saxiixa xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Man United ee Paul Pogba sanadka dambe.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Faransiiska ayaa qandaraaskiisa haatan ee Old Trafford waxa uu dhacayaa June 2022, waxaana ay u muuqataa mid sii kordheysa oo aan u badneyn inuu u saxiixo heshiis kordhin kooxda ah
Real Madrid ayaa muddo dheer lagu tiriyaa inay xiiseyneyso 28 jirkaan, kaasoo aan la fileyn inuu garoomada ku soo laaban doono ilaa bilowga sanadka soo aadan, sababtoo ah dhibaato bowdada ah.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay Marca , Los Blancos ayaa joojisay dhaqaaqa, iyadoo kooxda Carlo Ancelotti aysan haatan ku fikirin inay u dhaqaaqdo ku guuleystaha Koobka Adduunka.
Luka Modric , Casemiro iyo Toni Kroos ayaa markale qaab ciyaareed xoogan kusoo bandhigay Los Blancos xilli ciyaareedkan, halka Eduardo Camavinga , Federico Valverde iyo Antonio Blanco ay sidoo kale yihiin dookhyada dhexe.
Juventus ayaa la rumeysan yahay inay dooneyso inay dib ula soo wareegto Pogba, inkastoo da’yarkii hore ee Le Havre uu ku laaban karo kooxdii uu matalay intii u dhaxeysay 2012 iyo 2016.